खस्दै पहाड थुनिदै नदी « News of Nepal
खस्दै पहाड थुनिदै नदी
त्रिबेणी नगरपालिका वडा नं ९ पैंमाको पहिरो खस्ने क्रम जारी छ । पहिरोकै कारण बुढगंगा नदी थुनिदै आएको छ । बुधबार साँझवाट निरन्तर वर्षे वषर््ोझरी संगै पहाड खस्ने क्रम जारी छ ।
बुढिगंगा नदी थुनिदा नदी किनार आसपासका जनता त्रसित छन् । पहिरो खस्ने र नदी थुनीने क्रमम बढ्न थालेपछि सांफे–मार्तडी सडक खण्ड अबरुद्ध हुने त्रासले लोमो तथा छोटो दुरीका यातायातका साधन बल्देमै रोििकएका छन् । बुढगंगानदी थुनिदै गएकोछ सडक तलवाट पहिरोजान थालेको ले बस बल्देमै रोक्नुपरेको बसब्यसायिले बताए ।
पहिरोका कारण त्रिबेण्ी नगरपालिकाको वडा नं. नौं स्थित पैंमा गाउँको करिव २५० रोपनी भात खाने खेत पाखो जग्गा बगेको छ । पहिरोका कारण ६५ परिवारका घरछाना भत्केका छन्। मालागाड जलद्यिुत आयोजनाको विद्यूत लाईन अबरुद्ध भएको छ ।
‘त्यसैगरी दीघकालिन ब्यबस्थापनका लागि नगरस्तरीय विपत ब्यबस्थापन निर्देशका जारी गरी कार्यन्वयन ल्यमा ल्याएको । बुडिगंडा नदीको वहाव जतिवेलापनि बढ्न सक्ने र सम्भावित ठुुलो क्षेती हुने पूर्वानुमान गरी सबै वडामा बुडिगंगा नदी आसपास मा वस्न सार्वजनिक सूचना सहित जारी गरेका छोैं’ त्रिबेणी नगरपालिकाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत खगेन्द्र वहादुर सांउदले जानकारी दिनुुभएको छ।
प्राविधिक ईन्जिनियरका अनुसारः पहिले माटो चेक जांच नगरी सडक निर्माणगर्दा अहिले समस्याआएको हो । बार्जुगाड देखि मार्तडी सम्मको करिव २९ किलो मिटर वाटो नदीकै कारण उच्च जोखिममा रहेको सांफे मार्तडी डिभिजन सडक का कमचारी कृष्ण बुढाले वताउनुभयो ।
माथिवाट पहिरो जाने तल नदीले काटेने हुंदा सडक यातायात, विजुली, घरखेत जोखिममा छन् । बुडिगंगा नदी थुनिदा बाजुराका बुडिगंगा र त्रिबेणी नगरपालिका लगायत छिमेकी जिल्ला अछामको सांफेबगर नगरपालका डुवानमा पर्ने सम्भावना बढि छ । अहिले सम्म सिलिप मात्र गएको छ ।
‘द्धारीमा पहिरो जाने हो भने बुढगंगा नदी थुनिन्छ साफेवर नगरपािलका डुवानमा पर्न सक्ने वढि सम्भावना छ ।’ अछाम स्थित पूर्वाधार विकास कार्यलयका प्रमुख जंगबहादुर थापाले वताउनुभएको छ ।
यस्ता विकल्प सोचे सडकको एलाइन्म्यान्ट पविर्तन गरी सडक सुचारु गर्न सकिने कार्यालय प्रमुख थापाले वताउनुुभएको छ । तत्काल त्यो पनि सम्भव नरहेको र जिल्लामा पटक पटक सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि पनि सडक विभागले कुनै सुनुवाई नगरेको बडिमालिका नगरपािलका प्रमुख पदम बडुवालले वताउनुभएको छ ।
सडकको संरक्षण गर्न बायोइन्जिनियरिङ्गको पाटो एकदमै कमजोर छ । त्यसमा कसैको ध्यान गएको छैन । सडक क्षेउछाउमा रुख, विरुवा, घांस राप्ने,े विरुवाका हांगाकाटेर लगाउने ,माटो भर्ने लगायतका तमाम उपाय छन् । विडम्वना सडक संरक्षणको पूर्वयोजनामा सम्बद्ध हामी कसैको ध्यान नगएको पूर्वाधार विकास कार्यालय प्रमुख थापाले स्व्ीकानुभएको छ ।
केही दिन अगाडि पहिरोको अवलोकन गर्न बडिमालिका नगरपालिका प्रमुख पदम बडुवालको नेतृत्वमा जिल्लाको एक टोली उक्त क्षेत्रमा गएको सामाजिक सञ्जालबाट थाह भएको छ। यद्येपी अनुुगमनपछि बाढि पहिरो नियन्त्रण गर्न केगर्ने ? भन्ने वारे के योजना बनाए ? त्योभने बाहिर अआएको छैन । समाप्त
पाटन अस्पतालमा मृत्यु भएका एक युवाको पीसीआर रिपोर्ट
प्यूठानमा सलहले ४३१ हेक्टर कृषि बालीमा
‘इनफ इज इनफ’ अभियन्ता र सरकारबीच